Fitahiana be dia be ho azon’ny vahoakan’Andriamanitra (1-12)
Fanasambe misy divay tena tsara (6)
Tsy hisy fahafatesana intsony (8)
25 Ianao no Andriamanitro, Jehovah ô! Mankalaza anao aho ary midera ny anaranao.Fa nanao zava-mahagaga be dia be ianao,+Dia zavatra efa nokasainao* hatramin’ny taloha ela be,+Satria tsy mivadika ianao sady mendri-pitokisana foana.+ 2 Fa nataonao lasa korontam-bato ny tanàna,Ary lasa zavatra efa ravarava sisa ny tanàna voaro mafy. Tsy tanàna intsony ilay tilikambo fonenan’ny vahiny,Ary tsy haorina intsony koa. 3 Hanome voninahitra anao àry ny vahoaka matanjaka,Dia hatahotra anao ny tanànan’ireo firenena mpanjakazaka.+ 4 Lasa manda fiarovana ho an’ny madinika mantsy ianao,Fiarovana mafy ho an’ny mahantra mijaly,+Fialofana amin’ny oram-baratra,Ary alokaloka amin’ny hafanana.+ Rehefa mamely hoatran’ny oram-baratra mifafy amin’ny manda ny mpanjakazaka, 5 Toy ny hafanana migaingaina any amin’ny tany karakaina,Dia ataonao mangina ny tabataban’ny vahiny. Hoatran’ny hafanana mihamalefaka rehefa tratry ny aloky ny rahona,Dia ampanginina koa ny hiran’ny mpanjakazaka. 6 Hanao fanasambe ho an’ny firenena rehetra i Jehovah Tompon’ny tafika, eto amin’ity tendrombohitra ity,+Dia fanasambe misy hanim-pito loha,+Fanasambe misy divay tena tsara,*Sy hanim-pito loha sady be tsoka,Ary divay tena tsara efa notantavanina. 7 Hesoriny* eto amin’ity tendrombohitra ity ny lamba manarona ny vahoaka rehetra,Sy ny lamba* voatenona mandrakotra ny firenena rehetra. 8 Hofoanany* tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana,+Ary hofafan’i Jehovah Tompo Fara Tampony ny ranomaso amin’ny tarehy rehetra.+ Hataony tsy afa-baraka intsony ny vahoakany, na aiza na aiza eran-tany,Fa i Jehovah no efa niteny an’izany. 9 Amin’izany andro izany, dia hiteny izy ireo hoe: “Izy no Andriamanitsika!+ Manantena azy isika,+Dia hamonjy antsika izy.+ Izy no Jehovah, Ary manantena azy isika. Andao isika hifaly sy hiravoravo satria mamonjy antsika izy.”+ 10 Fa hiaro an’ity* tendrombohitra ity ny tanan’i Jehovah.+Dia hohitsakitsahina ao amin’ny taniny ihany i Moaba,+Hoatran’ny mololo hitsakitsahina ao anaty zezika. 11 Hikapoka azy ny tanany,Toy ny ataon’ny mpilomano mikapoka rano amin’ny tanany rehefa milomano.Haetriny i Moaba fa mirehareha loatra,+Ka mailaka erỳ izy hikapoka azy amin’ny tanany. 12 Dia harodany ilay tanàna voaro mafySy ny manda fiarovany avo be.Hazerany amin’ny tany, eo amin’ny vovoka, izany.
^ Na: “Dia torohevitra.”
^ Na: “divay efa naotrika ela.”
^ Abt: “Hateliny.”
^ Na: “voaly.”
^ Abt: “hipetraka eto amin’ity.”